IChiefs ivuma ukushayeka ngabalandeli - Ilanga News
Home Ezemidlalo IChiefs ivuma ukushayeka ngabalandeli
UKaizer Motaung ufisa iPSL ibukele emaligini amakhulu kolweCoronavirus
USIHLALO weKaizer Chiefs, uKaizer Motaung uphakamisa ukuba iPremier Soccer League (PSL) ibuyekeze indlela eyenza ngayo izinto odabeni oluthinta ukuhaqeka kwabadlali yiCoronavirus, edala iCovid-19 esibulale izigidi zabantu umhlaba wonke jikelele selokhu ibheduke ngo-2019 eChina. Ebhala engosini yakhe yokusonga unyaka kwi-website yale kilabhu uMotaung, uthe bathuke boma iPSL ichitha isicelo sabo sokuhlehliswa kwemidlalo ewu-5 yeDStv Premiership ebihlelelwe ukuba bayigijime ngoZibandlela.
Kule midlalo ngoweCape Town City noweLamontville Golden Arrows abangalubhadanga kuyona, noweSekhukhune United ‘aba patanisa’ isikwati esawunqoba ngo-2-0, oweRoyal AM abahlulwa kuwona ngo-1-0 noweMaritzburg United abayiguqisa ngo-2-0. Kule midlalo emithathu iChiefs beyiqeqeshwa ngu Arthur “10111” Zwane oyisekela likaStuart Baxter oyinhloko yabaqeqeshi bale kilabhu ebalwa nalawo asemizamweni yokuketula iMamelodi Sundowns ebukeka inethezekile esicongweni se-log. UMotaung uthi sibashaqise kakhulu isinqumo sokulahlwa yicala yiPSL ngokungayi kule midlalo phezu kokuba babesichaze kahle isimo sabo, esasingaphezulu kwamandla.
Le kilabhu phambilini yakuveza ukuthi izimisele ngokuludlulisela kwiSouth African Football Association (Safa) Appeals Board lolu daba uma lungayivuni kanjalo nasezinkantolo zamacala zakuleli uma nalapho ingagculisekile ngesinqumo. UMotaung uthi ngendlela iPSL okusetshenzwe kanzima ngakhona kwakhiwa isithunzi sayo njengoba ibalwa namaligi ahlonishwayo emhlabeni, kakukaze kube yisifiso sakhe ukuthi azithole aseqophisana nayo okungaholela ekwehleni kwesithunzi sayo.
Uthi ukholwa wukuthi iPSL kumele isike iphethini endleleni amanye amaligi amakhulu alusingatha ngayo udaba lokuhaqeka kwabadlali yiCoronavirus. Emaligini amakhulu ase-Europe, amakilabhu asuke ethole ukuthi abadlali bawo abaningi bahaqwe yileli gciwane, ayavunyelwa ukuba kuhlehliswe imidlalo yawo ukugwema ukuba lo mkhuhlane usabalale nasezimbangini zawo. Nokho kuleli iPSL yathatha isinqumo sokuthi kayikho ikilabhu eyovunyelwa ukuhlehliselwa umdlalo ngenxa yalo mkhuhlane. Yathi amakilabhu avumelekile ukusebenzisa abadlali bezigaba ezincane (reserve) uma isimo siphoqa.
Akhona amakilabhu aseke akuzama ukuhlehliselwa imidlalo kodwa achithwa, kubalwa iCape Umoya nePolokwane City abadlala kwiGladAfrica Championship. UMotaung ubuye wazwakalisa ukukhathazeka kwabo ngokungavunyelwa kwabalandeli emidla lweni njengoba bewumgogodla wale kilabhu phela ikwazi ukugcwalisa izinkundla kunoma yisiphi isifundazwe sakuleli yinqobo nje uma isefomini kulezo zinsuku. Uthi ukungabi bikho kwabalandeli, sekwenza bathembele kakhulu kubaxhasi bale kilabhu. Ubuye waveza ukuzwelana nemindeni elahlekelwe yizihlobo zayo nyakenye.
Previous articleUmidwayidwa uSomlomo weTheku
Next articleUmndeni ucela usizo ngowathunjwa ngoKhisimusi